February | 2017 | Hassan Mudane
Isbarbardhig: Ciyaar Siyaasaddeedkii 1992 iyo 2017
February 28, 2017 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Muhiimada ay taariikhdu leedahay waxay tahay in wax laga barto. Oraah muujineysa ujeeddada taariikhda ayaa waxaa laga qoray Abwaan Shube oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed wuxuuna yiri “Dib u eega taariikhda waa laga dab qaataaye.” Haddaba, qormadan waxay dib u eegeysaa ciyaar siyaasaddeedkii dhex maray labo beelood oo ka tirsan beelaha Soomaaliyeed. Waa […]
February 17, 2017 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Kalsooni waa dareenka aad ka qabto naftaada ama waa waxa aad ka aamminsan tahay naftaada. Hadaad isku aragto qof aan wax qabsan karin, nolosha ka dhacsan, nasiib daran, sidoo kalena aad naftaada ka qabto aragti taban ogow waxaad noqonaysaa col hortiis jabay! Adiga iyo guuli isma arki doontaan waayo guusha waxay u martisaa qofka naftiisa […]
Qormadan waxay ku saabsan tahay isbeddal siyaasaddeedka cusub ee Soomaaliya. Dalka Soomaaliya waxay heshay hoggaan cusub oo laga filayo in uu fulin doono balanqaadkii ahaa nabad iyo nolol. Soomaaliya waxay cagta saartay waddadii ay ku gaari laheyd hannaan demoqoraadiyadeed oo ku dhisan hal qof iyo hal cod. Isbeddalkan cusub wuxuu tusaale dhab ah u noqday […]